FTTH Manyiminya Kuparadzirwa panosangana ODP-02
ADSS waya Guy kutaba JS
Stainless Steel Straps su 201
Kugozha Clamp PA-3000
Insulated Nokuboora Connector P2X-95
FTTH internet optic panosangana, anonziwo optic internet pfungwa ane zviteshi zviviri, izvo rinobvumira chokugadza mumwe kana vaviri internet optic adapters, inobva SC faibha Manyiminya mhando.
FTTH faceplate wakaumbwa ABS epurasitiki. Indoor wall-akatasva mhando naro kunoitwa 2 kwakakurudzira screws 25 * 4 saizi.
Kukura magumo User Manyiminya bhokisi vane 86 * 86 * 22 rakafara zvokuti yakakodzera internet netambo vachikotama nharaunda No splice tireyi waida, chiedza uye chinofadza nechitarisiko, ane simba zvokuimba kudzivirirwa.
Anogovera vakasununguka vanoshandisa mukana kana mashoko mukana kwakavakirwa FTTH michina
The Manyiminya faibha netambo, nama tambo kana pigtails netambo mazano mune Manyiminya rusvingo nzira yokubudisa kubva pasi. Zvadaro, waya kunotungamirira kubva kumugumo User kugumisa bhokisi kuti zvinoshingaira zvokushandisa.
FTTH internet optic panosangana
FTTH chikomboredzo YK